amizing Archives ⋆ Lovely Myanmar
ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခါဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်က တလွဲဟာသပုံရိပ်လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံလေးတပုံချင်းစီကို ကြည့်ပီး ဘယ်နေရာလေးတွေ လွဲနေလဲဆိုတာ ရှာကြည့်ပြီး ရှာတွေ့သွားတဲ့အခါ ရယ်မောနိုင်ပါစေနော်။ တချို့ပုံတွေမှာဆိုရင် တကယ့်နေရာ ကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာတောင် မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဆောက်ပြသွားတဲ့ စကေးလေးတွေကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။ ပုံတချို့မှာတော့ ဆောက်လက်စလား ဆောက်လို့ပီးသွားပီလားတောင် မခွဲခြားနိုင်တဲ့ အဆောက်အအုံပုံရိပ်တွေတောင်ပါဝင်ပါတယ်။ အခုပုံမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ အဆောက်အအုံဒီဇိုင်းတွေဟာ ဒီဇိုင်းဆွဲသူရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အမှားအယွင်း ဖြစ်သွားပြီး အခုလို တလွဲဟာသပုံရိပ်လေးတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ပရိသတ်ကြီးလည်း မိမိအိမ်ဆောက်တဲ့အခါ တကယ် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်တွေကိုသာ အလုပ်အပ်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းပြီး နေချင်စဖွယ်ဖြစ်တဲ့ အိမ်လေးကပို ဖန်တီးနိုင်ပါစေနော်။ အခုလို ထူးထူးဆန်းဆ်းပုံလေးတွေကို ရှာဖွေ တင်ဆက်ပေးအုန်းမှာ မို့လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့ …
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အူတာပရာဒက်ရ်ှပြည်နယ်၊ Jaunpur မှာ နေထိုင်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ဖဲရိုက်ဖို့ငွေမရှိတော့ သူ့မိန်းမကို ဖဲပေါင်ရိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲဒီလို ဖဲပေါင်ရိုက်တော့လည်း သူပဲ ဆက်ရှုံးခဲ့တာမို့ သူ့ကတိအတိုင်း ဖဲနိုင်သူတွေကို မိန်းမနဲ့ ပျော်ပါးခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မိန်းမဖြစ်သူက ငြင်းဆန်နေလို့၊ သူရဲ့ ဘော်ဒါတွေက ဖဲဝိုင်းမှာ လင်ဖြစ်သူထားခဲ့တဲ့ ကတိအတိုင်း နှစ်ကြိမ်ဆီ အဓမ္မကျင့်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်၊ တစ်ကြိမ်ဆီသာ အရာရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ အဲဒီနောက် အဆိုပါ အမျိုးသမီးမှာ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူဟာ အဓမ္မကျင့်ခံရပြီးနောက်၊ သူမရဲ့ ဦးလေးအိမ်ကို ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဖဲသမားလင်က နောက်က လိုက်သွားပြီး၊ ဒီကိစ္စကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဖို့နဲ့ သူ နောက် ဒီလိုမဖြစ်စေရဘူးလို့ ကတိပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူ့မိန်းမလည်း အိမ်ပြန် …
နှင်း နဲ့ ရေခဲတွေကို တွေ့မြင်ဖို့ ပြည်တွင်း ခရီးသွား သူများစွာကတော့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို အများဆုံးသွားရောက်လေ့ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ တွေ့မြင်နေရတဲ့ နှင်းတွေနဲ့ ရေခဲတွေကို ပြည်တွင်းတစ်ခုတည်းတွေ့မြင်နိုင်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုကချင်ပြည်နယ်မှာရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ သာမာရွာတွေနဲ့မတူပဲ အေးချမ်းလွန်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံလေးတွေကို ပရိသတ်တွေလည်းတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ရွာလေးကတော့ ကချင်ပြည်နယ် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်လေးပဲဖြစ်ပြီး နေရာအနှံ့အပြားမှာ ဖြူဖွေးအုံ့စိုင်းနေတဲ့ နှင်းခဲကြီးတွေနဲ့ အေးမြတဲ့ သဘာဝကြီးကိုတော့ အားလုံးတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ ရေခဲပြင်ရွာလေးဖြစ်တဲ့အပြင် မိုးရေထက် နှင်းကိုပိုမိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရှားရှားပါးပါးရှိတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ခေါင်လန်ဖူးမြို့လေးကတော့ ပြည်တွင်းခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်စေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးထွက်ခြင်းကို စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း၊ နှင်းတွေကြားမှာဆော့ကစားချင်သူတိုင်းအတွက် အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ရေခဲ့ပြင်ရွာလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ခေါင်လန်ဖူးမြို့ရှိ ရေခဲ့ပြင်ရွာလေးရဲ့ သဘာဝအလှပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ …
သင့်ကိုအံ့သြသေင့်နစေမဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က လူ ၈ယောက်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူပေါင်းများစွာရှိတဲ့အလျောက် မတူညီတဲ့ လူတွေလဲ များစွာရှိကြပါတယ်။ အဲ့လိုလူတွေထဲမှာ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ သူတွေလဲရှိပါတယ်။ မွေးရာပါ ထူးခြားတဲ့သူတွေကလဲ ရှားရှားပါပဲ…တချို့သူတွေဆို Super Power တွေတောင်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ ခုဖော်ပြသွားမဲ့သူတွေကတော့ ပုံမှန်သူတွေဆိုပေမဲ့ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲ့သူတွေကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အရပ်အရှည်ဆုံးလူသား သူဟာဆိုရင် ပရိသတ်ကြီး သိကြတဲ့အတိုင်း တူရကီက Sultan Kosen ပဲဖြစ်ကာ အရပ်က ၈ပေ၃လက်မရှိပါတယ်။ သူဟာ ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အရပ်အရှည်ဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့တက်တူးအများဆုံး အမျိုးသမီး Julia Gnuse ဆိုတဲ့ အသက် ၆၁နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးဟာဆိုရင် သူမ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ၉၅ရာခိုင်နှုန်းဟာ တက်တူးတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ယာကူဇာလဲမဟုတ်ဘူး မာဖီယာလဲ မဟုတ်ဘူး….ကြွေတယ်ဟုတ်။ လူသားဘာဘီမလေး ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ သူကိုဘာဘီရုပ်လေးလို့ပဲ ပရိသတ်ကြီး သိကြမှာပါ။ …
တစ်သက်မှာတစ်ခါ ရိုက်ဖူးဖို့ မလွယ်တဲ့ အချိန်အခါကွက်တိကျတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ
ဒီနေ့မှာတော့ မိုဘိုင်းနည်းပညာ၊ ကင်မရာနည်းပညာ တိုးတက်လာတာနဲ့အတူ နေ့စဉ်မြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့က အရမ်းလွယ်ကူလာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဖန်တီးရိုက်ယူလို့ ရတာတွေ ရှိသလို၊ ကံအကြောင်းသင့်မှ ရနိုင်တာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ပြောချင်လွန်းလို့ ပရိသတ်တွေအတွက် ကံကောင်းမှ ရိုက်လို့ရနိုင်မယ့် ရှားရှားပါးပါး အဖြစ်အပျက် ဓါတ်ပုံတွေကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁. လင်းယုန်ဌက် ပျံသန်းလာတာ မီးခိုးတွေ ထွက်နေတာလား။ ဒါဟာ ဖိုတိုရှော့မဟုတ်ပါဘူး ကောင်းကင်မှာ လေယာဉ်ပျံသန်းလို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ နေရာမှာ ဌက်က တည့်တည့်ပျံလာမိတာပါ။ ၂. တော်တော်လေးကို ကံကောင်းမှ ရမယ့် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံပါ။ ငါ့လက်ကို ဆွဲပြီး ဒီဘက်ကို ကူးလာခဲ့လို့ လှမ်းပြောနေသလိုပဲ။ အန်နီမေးရှင်းကားတစ်ကားထဲက မြင်ကွင်းနဲ့တောင် တူနေတယ်။ ၃. သင့်သခင်က အစာစားချိန်ရောက်ပြီ ဟု ပြောသောအခါ။ ကြောင်ဖက်တီးလေး …
ကိုယ့်ဆီးကို ပြန်သောက်ခြင်းကြောင့် အသားဖြူနေခြင်းဟု ဆိုလိုက်တဲ့ အမျိုးသမီး
အ သက်(၃၀)အရွယ် Ruby Karyo အမည်ရ အမျိုးသမီးဟာ ကိုယ့်ဆီးကို ပြန်သောက်ခြင်းကြောင့်၊ အခုလို အသားရည်စိုပြည်လန်းဆန်းနေတာဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ Ruby ဟာ (၁၁)နှစ်ကြာ Urine therapy ပြုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး သူမကတော့ အသားရေအတွက် ဂုဏ်ယူနေပါတယ်။ Ruby ဟာ တစ်ခါတလေမှာ မိမိရဲ့ဆီးရေနဲ့ မျက်နှာသစ်လေ့ရှိကြောင်း၊ ဒီနည်းစနစ်ကို ဖခင်ဆီကနေ ရရှိခဲ့တာလို့ ပြောပါတယ်။ ကိုယ့်ဆီးနဲ့ကိုယ် မျက်နှာသစ်ရာက သူငယ်ချင်းတွေက “မင်းမျက်နှာ ကြည့်ကောင်းလာတယ်”လို့ ပြောရာကနေ Urine therapy ကို စတင်ခဲ့တာပါ။ Ruby ဟာ ကလေးတစ်ယောက် မိခင်ဖြစ်ပြီး၊ သူမ အသက်(၁၉)နှစ်မှာ ဖခင်ဖြစ်သူက “မင်း လှချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်သေးနဲ့ကိုယ် မျက်နှာသစ် “လို့ တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း၊ အဲဒါကြောင့် မနက်လင်းပြီဆိုတာနဲ့ သူမဟာ …
အမှတ်တမဲ့ကြည့်ရင် တက်တက်စင်အောင် အထင်မှားသွားစေနိုင်တဲ့ ပုံရိပ်များ
ပရိသတ်ကြီးရေ..ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ အထင်လွဲ အမြင်လွဲသွားစေနိုင်တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်။ တခါတလေ ကိုယ်ကိုတိုင် သတိမထားမိပဲ အမှတ်တမဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ ထွက်လာတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်ကြည့်ရင် ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြစ်သွားတာမျိုးလေးတွေကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အခုပြထားတဲ့ ပုံလေးတွေမှာလည်း အမှတ်တမဲ့ ရိုက်လိုက်ရာကနေ အမြင်လွဲမှားသွားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တချို့ပုံတွေဆိုရင် နှစ်ခါ ပြန်ကြည့်ယူရတဲ့ အထိတောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီး အတွက်လည်း အပျင်းပြေတဲ့ အနေနဲ့ ကြည့်ရှု လို့ရအောင် ဒီလို ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဒီထဲဓာတ်ပုံလေးတွေလို ကိုယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေက ထူးထူးဆန်းဆန်းအမြင်ဖြစ်သွားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေရှိရင် Comment မှာ ပြန်လည်ဝေမျှပေးခဲ့ပါအုန်းနော်။ Source : Bloggers Arena “Myanmarload’
၁ Annie Edson Taylor – Niagara ရေတံခွန်ပေါ်ကနေ စည်ပိုင်းစီးခဲ့သူ(ပထမဆုံးအကြိမ်) Annie Edson Taylor ဟာ Niagara ရေတံခွန်ကို ပထမဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စည်ပိုင်းနဲ့စီးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးသောလူသားဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ဘ၀သက်တမ်းကို ဆရာမနဲ့ dancer အဖြစ်ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမရဲ့စည်ပိုင်းစိတ်ကူးကြောင့် နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ ကူရှင်၊ လေ၀င်ပေါက်တွေပါဝင်တဲ့ စည်ပိုင်းကို သေချာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့ ၆၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ (Oct 24, 1901) မှာ သမိုင်းဝင်လုပ်ရပ်တစ်ခုကို လုပ်ခဲ့တာပါ။သူမဟာ ၁၉၂၁ခုနှစ်မှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပေမယ့်လည်း အခုအချိန်ထိ သူမကိုအမှတ်တရရှိနေကြဆဲပါ။ ၂ Maria Spelterini – Niagara ရေတံခွန်ပေါ်ကို ကြိုးတန်းလျှောက်ခဲ့သူ(ပထမဆုံးအကြိမ်) အီတလီမျိုးနွယ် Maria Spelterini ကတော့ Niagara ကို ကူးဖြတ်ချိန်မှာ …
ဗိုက်ကြီးသည်လို့အခေါ်မခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံး ဝေဖန်သူတွေကို ပညာသားပါပါနဲ့ မျက်လုံးပြူးအောင်လုပ်ပြခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး
Rizza Jane Robles Paragasအမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ၂၀၁၂တုန်းက လူတိုင်းသတိမထားမိခဲ့တဲ့၊ အလှောင်ခံရ၊ သဘောကျမယ့်ယောကျာ်းလေးမရှိခဲ့တဲ့ ခပ်ဝဝရုပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။ သူမဟာ သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကြောင့် အမြဲလိုလို အနိုင်ကျင့်ခံကသူတစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒ့ါကြောင့် သူမဟာ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အနာတရာတွေ ခနခနဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလို ကြိတ်ပြီး ငိုကြွေးခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်တွေလည်း အများကြီးမှ အများကြီးရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူမဟာနောက်ဆုံးမှာ စိတ်ဓာတ်တစ်ခုကို အခိုင်အမာတခုချခဲ့ပြီး သူမရဲ့အရမ်းဝနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဝိတ်ချဖို့အတွက် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူမတစ်ကြိမ်ကြိုးစားတယ် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး ၊ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်ကြိုးစားတယ် ဒါပေမယ့်လည်း ထပ်မအောင်မြင်ခဲ့ပြန်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်လည်း သူမဟာ လက်မလျော့လဲ သုံးကြိမ်မြောက် ဝိတ်ချဖို့ကို ထပ်မံကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာတော့ သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ အရင်ကထက်ပိုခိုင်မာလာခဲ့ပြီး သူမရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဗိုက်ကြီးသည်လို့ အခေါ်ခံရမှုကနေ လွတ်မြောက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်လှလှလေးမှာ ဂါဝန်လှလှလေးတွေဝတ်ချင်တဲ့ သူမရဲ့အိမ်မက်ဆီကို …
1. Ri Sol-ju ဟာ Chongjin မြို့လေးမှာ မွေးဖွားပြီး သူဟာ ဆရာဝန်တဲ့ ကျောင်းဆရာမ မျိုးနွယ်က ပေါက်ဖွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမကို 1985 ခုနှစ် 1989 ခုနှစ်ကြားမှာ မွေးဖွားပြီး အခုဆို အသက် 28 နှစ် ဒါမှမဟုတ် 33 နှစ်လောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ 2. သူမဟာ ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နဲ့ လက်မထပ်ခင်မှာ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ အထင်ကရ တက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့ ပြုံယမ်းမှာရှိတဲ့ Kim Il Sung တက္ကသိုလ်မှာ တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ 2005 ခုနှစ်မှာ တောင်ကိုရီးယားကို အလည်သွားခဲ့ပြီး Asian Athletics Championships အတွက် နည်းလမ်းအချို့ကို သင်ကြားပြီး သူ့နိုင်ငံကို ပြန်အကျိုးပြုခဲ့ပါတယ်။ 3. Ri Sol-ju ဟာ အဆိုကိုလည်း ဝါသနာထုံပြီး …